Taallada Shiinaha Marmarka Shiinaha warshad weyn oo biyo qurxineed leh iyo soosaarayaal | Shaqooyinka Atisan
Taallada marmar dibedda ilo biyo waaweyn oo lagu qurxiyo
TAG: Isha biyaha marmarka ilo biyo dibadeed ah Jano ilo marmar ah
Xirxirida sanaadiiqda alwaaxa Gudaha: Xumbo jilicsan
Muuqaal dhagax ah oo marmar qurxoon laga sameeyo ilo biyo badan
Goob, Gazebo, Sawir gacmeedka xayawaanka, farshaxan diimeed, Taalada Buddha, Dhagax dhig, Bust Dhagax, Xaaladda Libaaxa, Xaaladda Maroodiga Dhagaxa iyo Xardhida Xayawaanka. Ball Isha Isha Dhagaxa, Weelka Ubaxa Dhagaxa, Sawir gacmeed taxane ah, Dhagax dhagax, Miis xardhan iyo Kursi, Xardho Dhagax, Marmar xardho iyo iwm.
Waxaan leenahay ilo qaabab kala duwan ah oo laga kala doorto isha, fadlan nala soo xiriir haddii aad u baahatid. Waa ikhtiyaar caqli gal ah in la rakibo a isha biyaha marmar beerta ama barxadda. Marka hore, isha ayaa muujin karta tayada nolosha. Marka labaad, isha waxay ku dari kartaa firfircoonaan iyo firfircooni beerteenna. Biyo kasta oo biyo ah oo yar yar ayaa qoyn kara deegaanka isla markaana nadiifin kara hawada.
Waxaan nahay warshad xardhan xirfadle marmar ah waana aqbali karnaa ilaha marmarka jumlada iyo caadada ah. Waxaan haynaa noocyo badan oo ilo ah oo aan kala dooran karno, sida ilo biyood taallo marmar ah, ilo biyo ah oo marmar ah, ilo cascading ah iyo ilo derbi. Waad nala soo xiriiri kartaa haddii aad wax baahi ah u qabtid tan.
J: Waxaan xaqiijin doonnaa naqshadeynta, cabbirka iyo maaddada marka hore, ka dibna go'aan ka gaari doonnaa sicirka, oo aan sameynaa heshiiska, ka dibna bixinnaa deebaajiga. Waxaan bilaabi doonaa xardho sheyga.
Qiimaha tartanka isha biyaha beerta dibadda ...
Taabasho marmar tayo sare leh biyo daadinta banaanka ...
Naago qurxoon oo qoob ka ciyaaraya il iib ah
Qaabka Yurub isha kalluunka isha il biyo iyo wiil ...
Qurxinta bannaanka weyn ee naxaasta qurxinta ...